Imidaniso eqhelekileyo yommandla weCaribbean: Ukusuka kwi-salsa ukuya kwi-bachata | Iindaba Zokuhamba
ULuis Martinez | 05/05/2021 12:08 | America, isiko
Imidaniso yommandla weCaribbean yayineengcambu zawo ngaphambili. Oku sikubiza ngokuba ngumhlaba omkhulu obandakanya amazwe aliqela ahlanjwe ngulo kanye ULwandle lweCaribbean kunye neziqithi ezijikelezwe yile nxalenye yoLwandlekazi lweAtlantic. Phakathi kwezokuqala kukho Mekhsikho, Kholambiya, Nikharaguwa o IPanama, ngelixesha lokugqibela, sinokukhankanya izizwe njenge Tyhubha (ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga namasiko eli lizwe, cofa apha), Republic Dominican o Jameyikha.
Ke ngoko, imidaniso eqhelekileyo yommandla weCaribbean yile yeqheliswayo kuloo mmandla mkhulu. Okwangoku, ziziphumo zokudityaniswa kweempembelelo ezintathu: inzalelwane, iSpanish kunye neAfrika, abokugqibela baziswa apho ngabo babenamakhoboka njengendawo abaya kuyo. Ngapha koko, uninzi lwalemidaniso yayibanjelwe ekupheleni kweentsuku zokusebenza nzima kwabo bobabini amakhoboka kunye nabasebenzi abakhululekileyo. Kodwa, ngaphandle kokuqhubela phambili, siza kukuxelela malunga nezi singqisho.
1 Imidaniso eqhelekileyo yommandla weCaribbean: iindidi ezinkulu
1.1 ISalsa, umdaniso weCaribbean ngokugqwesa
1.2 IMerengue, igalelo laseDominican
1.3 I-mambo kunye nemvelaphi yayo yaseAfrika
1.5 ICumbia, ilifa lemveli laseAfrika
1.7 Eminye imidaniso eqhelekileyo yommandla ongathandwa kangako yiCaribbean
Imidaniso eqhelekileyo yommandla weCaribbean: iindidi ezinkulu
Into yokuqala ebonakalayo kule midaniso yile inani elikhulu labo bakhoyo. Umzekelo, oko kubizwa ngokuba zimnyama, owayevela kwisiqithi saseSanta Lucia; i puja Colombian, i sextet okanye ziyi palenquero okanye igubu elincinci, wazalelwa ePanama. Kodwa, ngenxa yokungenzeki kokuma kuyo yonke le mingqungqo, siza kukuxelela ngezona zidumileyo.
ISalsa, umdaniso weCaribbean ngokugqwesa
ISalsa, umdaniso oqhelekileyo wengingqi yeCaribbean ngokugqwesa
Into enomdla kukuba, owona mngqungqo weCaribbean uthandwayo ENew York ukusuka kumashumi amathandathu eminyaka kwinkulungwane ephelileyo. Kungelo xesha ke iimvumi zasePuerto Rican ezazikhokelwa yiDominican UJohnny pacheco wamenza waduma.
Nangona kunjalo, imvelaphi yayo ibuyela kumazwe aseCaribbean kwaye ngakumbi ngokukodwa Tyhubha. Ngapha koko, zombini isingqisho kunye nengoma yazo isekwe kumculo wesintu ovela kwelo lizwe. Ngokukodwa, ipatheni yayo yesingqisho ivela baziikubhite kwaye umculo uye wasuswa bango montuno.
Kananjalo iCubaan zizixhobo zakhe ezininzi. Umzekelo, i-bongo, i-pailas, i-güiro okanye i-cowbell Ezihambelana nezinye ezifana nepiyano, amaxilongo kunye neebhasi eziphindwe kabini. Okokugqibela, ukuvumelana kwayo kuvela kumculo waseYurophu.
IMerengue, igalelo laseDominican
IMerengue ngowona mdaniso uthandwa kakhulu kwi Republic Dominican. Kwakhona kwafika EUnited States kwinkulungwane ephelileyo, kodwa imvelaphi yayo ibuyele kwishumi elinesithoba kwaye ayicacanga. Kakhulu kangangokuba kukho iimbali ezininzi malunga nayo.
Enye yezona zaziwa kakhulu ithi iqhawe lomthonyama lenzakele emlenzeni lilwa neSpanish. Xa ebuyela kwilali yakhe, abamelwane bakhe bagqiba kwelokuba bamenzele itheko. Kwaye ekubeni babona ukuba uyaqhwalela, bakhetha ukumxelisa xa bedanisa. Isiphumo kukuba bayirhuqa imilenze kwaye bashenxisa isinqe sabo, izinto ezimbini ezibonakalayo kwimeringue choreography.
Nokuba yinyani okanye ayiyonyani, libali elihle. Kodwa inyani kukuba lo mdaniso uye waba ngowona uthandwa kakhulu kwihlabathi, kangangokuba ubhengeziwe Inkcubeko yeLifa leMveli engabonakaliyo ngu-UNESCO.
Mhlawumbi eyona isenyanisweni sisithethe esichaza ukuba ivela phi kubahlali bommandla wase ICibao ukuba bazokuthengisa iimveliso zabo ezixekweni. Babehlala kwiindawo zokuhlala kwaye omnye wabo wayebizwa ngokuba nguPerico Ripao. Kulapho ke bazonwabisa khona ngokwenza lomdaniso. Yiyo loo nto yabizwa ngelo xesha kunye nendawo ngokuchanekileyo UPerico Ripao.
Ngokumalunga nomculo wakhe, isekwe kwizixhobo ezintathu: ikhodiyani, igüira kunye necambora. Okokugqibela, kukwanomdla wokwazi ukuba oyena mntu uphambili uxanduva lokuphucula kunye nokukhulisa imeringue yayinguzwilakhe. URafael Leonidas Trujillo, bonke abalandeli bale nto bayile izikolo kunye neeokhestra ukuyinyusa.
I-mambo kunye nemvelaphi yayo yaseAfrika
Phakathi kwemidaniso eqhelekileyo yommandla weCaribbean, oku kwaphuhliswa e- Tyhubha. Nangona kunjalo, imvelaphi yayo ibangelwa ngamakhoboka aseAfrika afike kwesi siqithi. Ngayiphi na imeko, uhlobo lwala maxesha lomdaniso lubangelwe yifayile ye- Iokhestra yeArcaño kwiminyaka yeshumi leminyaka yokugqibela.
Ukuthatha Idolophu yaseCuba, bayikhawulezisa kwaye bazisa ukuvumelanisa kwingxoxo ngelixa besongeza izinto zoluhlobo montuno. Nangona kunjalo, iya kuba yiMexico UDamaso Pérez Prado Ngubani oza kwenza ukuba ikamva liqaqambe kwihlabathi liphela. Wenza oku ngokwandisa inani labadlali kwiokhestra kunye nokongeza izinto eziqhelekileyo zeJazz zaseMelika ezifana nexilongo, iisaxophones, kunye neebass eziphindwe kabini.
Uphawu kwakhona wenza ekhethekileyo Indawo yokulwa loo nto ibisenza umzimba uhambele kwisingqi sayo. Sele amashumi amahlanu kwinkulungwane yamashumi amabini, iimvumi ezininzi zatshintshela i-mambo ENew York ukuyenza inyani kwilizwe liphela.
Kwakhona wazalelwa kwi TyhubhaImvelaphi yayo ngokuchanekileyo ifumaneka kwisiphumo sombuso. Kwakukho abadanisi ababengakhululekanga ngesingqisho somdaniso osasazwa nguPérez Prado. Ke bajonge into ezolileyo kwaye ke yazalelwa kwi-cha-cha kunye nomoya wayo opholileyo kunye neengoma ezinomtsalane.
Ngokukodwa, ukudalwa kwayo kubangelwa ngumculi we-violinist kunye nomqambi UEnrique Jorrín, ekwakukhuthaza ukubaluleka kwamazwi eengoma aculwa yiokhestra iphela okanye yimvumi eyedwa.
Ngokutsho kweengcali, lo mculo udibanisa iingcambu ze Idolophu yaseCuba kunye neyakhe izinto, kodwa iyayitshintsha indlela yayo yokuncokola enesingqi nesingqisho. Ukongeza, yazisa ngezinto ze schottische Ukusuka eMadrid. Ngokubhekisele kumdaniso ngokwawo, kuthiwa wenziwe liqela elaliklolite kwiklabhu yeSilver Star eHavana. Ukunyathela kwakhe kwakwenza isandi emhlabeni okwakubonakala ngathi zizithonga ezintathu ezilandelelanayo. Besebenzisa i-onomatopoeia, babhaptiza uhlobo olo "Cha Cha Cha".
ICumbia, ilifa lemveli laseAfrika
Ngokungafaniyo neyangaphambili, i-cumbia ithathwa njengendlalifa imidaniso yaseAfrika abathathe eMelika abo babethuthwe njengamakhoboka. Nangona kunjalo, ikwanazo nezinto zomthonyama nezaseSpain.
Nangona namhlanje kungqungqwa kwihlabathi liphela kwaye kukho intetho malunga necumbia yase-Argentina, Chilean, Mexico kunye neCosta Rican, imvelaphi yalo mdaniso kufuneka ifumaneke kwimimandla EColombia nasePanama.
Ngenxa yesidibanisi ebesithetha ngaso, imigqomo ivela kumqolo weAfrika, ngelixa ezinye izixhobo ezinje Imaracas, iipos kunye negouache bangabemi baseMelika. Endaweni yokuba iimpahla ezinxitywe ngabadanisi zivela kuhlobo lwempahla yakudala yaseSpain.
Kodwa eyona nto inomdla kuthi kweli nqaku, elingumdaniso ngolu hlobo, ineengcambu zokwenyani zaseAfrika. Inika inkanuko kunye nomnyhadala wokudanisa onokuthi ufumaneke namhlanje entliziyweni ye Afrika.
Kukwangumdaniso wokwenene EDominican kodwa yandisiwe kwihlabathi liphela. Ivela kumashumi amathandathu eminyaka yenkulungwane yamashumi amabini ukusuka isangqa sebolero, nangona ikwabonisa iimpembelelo ezivela merengue kunye baziikubhite.
Ukongeza, kwi-bachata ezinye izixhobo eziqhelekileyo zeso isingqisho zatshintshwa. Umzekelo, ii-maracas ze-bolero zithathelwe indawo ngu igüira, ikwangamalungu osapho oluxubeneyo, kwaye baziswa kwiocala.
Njengoko kwenzekile neminye imidaniso emininzi, i-bachata yaqwalaselwa ekuqaleni kwayo njengomdaniso wezona klasi zithobekileyo. Emva koko yaziwa njenge "Umculo okrakra", eyenze ukuba kubhekiswe kwi-melancholy eyayibonakaliswe kwimixholo yabo. Yayisele ineminyaka yamashumi asibhozo kule nkulungwane yamashumi amabini xa uhlobo lwasasazeka kwilizwe jikelele lade lahlelwa yiUNESCO njenge Ilifa leMveli loLuntu elingabonakaliyo.
Kwelinye icala, kuyo yonke imbali yayo, i-bachata yahlulwe yangamacandelwana amabini. Inkqubo ye- tocnoamargue wayengomnye wabo. Idibanise iimpawu zalo mdaniso kunye nomculo owenziwe kwizixhobo ze-elektroniki ngelixa udibana nezinye iintlobo ezinje ijazz okanye iliwa. Oyena mlingisi wakhe ubalaseleyo waye USonia Silvestre.
Ingeniso yesibini ebizwa ngokuba yiyo pink bachata, efumene ukuthandwa ngakumbi kwihlabathi liphela. Kwanele ukuba sikuxelele ukuba amanani akhe makhulu UVictor Victor kwaye ngaphezu kwako konke, UJuan Luis Guerra ukuze uyiqonde. Kule meko, idityanisiwe I-ballad yothando.
Ngokumalunga nohlobo lwangoku, oyena mntu ubalaseleyo kwimvumi yaseMelika yemvelaphi yaseDominican URomeo Santos, kuqala neqela lakho, IAventura, kwaye ngoku solo.
Eminye imidaniso eqhelekileyo yommandla ongathandwa kangako yiCaribbean
Imidaniso esikuxelele yona ukuza kuthi ga ngoku iyafana neCaribbean, kodwa bagqithile kumda wayo ukuze badume kwihlabathi liphela. Nangona kunjalo, kukho eminye imidaniso engakhange iphumelele phesheya, kodwa ithandwa kakhulu kwindawo yeCaribbean.
Yimeko ye ngokudibeneyo, Imvelaphi yakhe ikummandla we Kholambiya ngaphambi kokufika kweSpanish. Idibanisa iimpembelelo ezivela kumbhobho wemveli kunye nesingqi seAfrika kwaye inecandelo elicacileyo lokulukuhla. Okwangoku ngumdaniso webhola ekhatywayo onesingqisho esonwabisayo nesiyolisayo. Ukuyidanisa, bahlala bethatha Izambatho eziqhelekileyo zaseColombia. Okwalolu hlobo lomdaniso yi fandango, engenanto yakwenza negama layo laseSpain. Imvelaphi yaseBolivia sugar, yasasazeka ngokukhawuleza Colabian Urabá. Yipaseji eyonwabisayo apho, ngokumangalisayo, abafazi baphatha amakhandlela ukwala ukudlala ngothando kwamadoda.
Iingcambu ezicacileyo zaseAfrika zinayo imephu. Kulo mngqungqo, yimigqomo kunye nalowo ufowunayo oseta isingqisho. Imvelaphi yayo yayihambelana nomsebenzi, kodwa namhlanje inethoni yomnyhadala engenakuphikwa. Ngumdaniso onamandla kwaye odlamkileyo, ogcwele ukungaqhelekanga.
Okokugqibela, siza kukuxelela malunga bullerengue. Njengayo eminye imidaniso yommandla weCaribbean, ibandakanya umdaniso, ingoma kunye nokutolikwa kwengoma. Le yokugqibela yenziwa kuphela ngamagubu kunye neentende zezandla. Ngokwengxenye yayo, ingoma ihlala isenziwa ngabafazi kwaye umdaniso ungenziwa zizibini kunye namaqela.
Ukuqukumbela, sikuxelele ngeminye yemidaniso ethandwa kakhulu kwiCaribbean. Abokuqala esithe sathetha ngabo baphumelele udumo kunye nokuthandwa kwilizwe liphela. Ngokwenxalenye yabo, eyokugqibela iyaziwa ngokulinganayo kwindawo apho yenziwa khona, kodwa ingaphantsi kulo lonke ilizwe. Kukho nawuphi na, baninzi abanye Imidaniso eqhelekileyo yommandla weCaribbean. Phakathi kwabo, siya kuthi sikhankanye ekugqithiseni farotas, i khwaza, eziswe eMelika yiSpanish, okanye Ndizokwazi-ndiyazi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » isiko » Imidaniso eqhelekileyo yommandla weCaribbean
Ezona zixeko zibalaseleyo zaseSpain zokundwendwela ngemoto entwasahlobo